Obbo Barakat Simoon aangoo gadi dhiisuuf iyyatan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Obbo Barakat Simoon aangoo gadi dhiisuuf iyyatan
Giddugala qo'annoo fi qorannoo Imaammataa Itoophiiyaatti, Ministira dame Indastirii ta'uun tajaajilaa kan jiran obbo Barakat Simoon aangoo fedhii isaaniin gadi dhiisuuf iyyachuu isaanii qondaalli giddugalichaa tokko BBC'f mirkaneessan.
Obbo Barakat waggoota dheeraaf dura taa'aa boordii ta'uun gaggeessaa kan turan Baankii Daldala Itoophiyaa keessaas fedhii isaaniin hojicha gadi dhiisuu isaanii torbee darbe keessa beeksisanii turan.
Obbo Barakat gaaffii isaanii torbee darbe keessa Ministira Muummeef kan dhiyeessan wayita ta'u, erga Kamisa darbeetii hojii irratti hin argamne jedhu qondaalli maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kun.
Namoonni dhiyeenyaan obbo Barakat beekan, turtii giddugalicha keessatti qabaniin gammadoo akka hin turre haa dubbatan malee, sababni obbo Barakat aangoo lamaanuu altokkotti gadi dhiisaniif hin beekamne.
Yeroo gara garaatti qorannoowwan dhimma bulchiinsaa fi imaammataa giddugalichi qoratee dhiyeessu, Ministira Muummee fi aangawoota olaanoo kanneen biroon fudhatama argatee hojiirra ooluu dhabuun obbo Barakat mufachiisee akka ture dubbatu namoonni itti dhiyeenyaan dhimmi kana beekan.
Goodayyaa suuraa Obbo Barakat qondaaltota ADWUI angafoota keessaa tokko
Aangoo isaanii gadi dhiisuuf sababa biraa qabaachuun isaanii hin mirkanoofne.
Giddugala qo'annoo fi qorannoo Imaammataa Itoophiiyaa, daayireektara olaanaa ta'uun gaggeessaa kan jiran obbo Abbaay Tsaahayyee dha.
Obbo Barakat qondaaltota ADWUI angafoota keessaa tokko yoo ta'an, hoggansa olaanoo paartii Warraaqsa Dimokiraatawaa Saba Amaaraati.
Waggoota 26 darbaniif taayitaawwan gurguddoo akka Ministira Beeksisaa fi Ministira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa ta'uun tajaajilaniiru.
Jeneraala, Pireezidaantii, Af-yaa'ii ... Achii hoo?
Dhuguma mootummaan jiddugalaa gahee irraa eegamu bahaa jiraa?
Afa-yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaaduulaa Gammadaa torbee darbe keessa fedhii isaaniitiin aangoo gadi dhiisuuf iyyachuun isaanii ni yaadatama.